China Sculpture metaly ivelany any ivelany ho an'ny trano fisakafoanana dekoraty sy mpanamboatra | Piedra
Zavamaniry vy ivelany misy ankehitriny ho an'ny trano fisakafoanana
Model No: MES64
Ny sary sokitra ivelany ivelan'ny kontemporer dia tena goavam-be satria haingo ivelan'ny trano fisakafoanana. Ho gaga ny masonao amin'ity sary sokitra stainless vy mahafinaritra ity. Ny lafiny ambony dia miaraka amin'ny loko miloko mavo, ary ny ambany misy loko mainty, izay endrika tsara tarehy araka ny itiavanao azy. Ny azontsika atao dia ny manome toky miaraka amin'ny kalitao lehibe. Maninona raha hifandray aminay amin'ny sary sokitra iray? Afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka sales1@brandsculptures.com raha mila fanazavana fanampiny.
Size 1.5m haavony na ambony kokoa
Weight Araka ny haben'ny sary sokitra
Isa isa MES64
Material 316L vy vy
Color Ny loko sary
DESIGN Ekena ny volavolan'ny mpanjifa
Port Xiamen, Sina
Momba ny santionany
1. Ny santionany dia azonay atao, fa ny fiampangana rehetra dia tokony ho ampahan'ny mpanjifa. Ny endrika rehetra dia mila vita hatrany am-piandohana. Raha apetrakao ny baiko lehibe, dia esorina amin'ny vidin'ny kaomandy ny sarany santionany.
2.Ny santionany namboarina miaraka amin'ny marika dia raisina an-tanana. Raha vao apetraka ny kaomandy, ho hita ny marika famantarana anao.
Ireto misy FAQ vitsivitsy izay afaka manampy anao hahalala bebe kokoa ny orinasantsika sy ny sary sokitra mahafinaritra.
1. Inona no vokatra azonao vokarina?
Manana 13 taona mahery ny famokarana sy fanandramana traikefa. Mpanamboatra matihanina sary sokitra stainless vy izahay, sary sokitra varahina, sary sokitra vy Corten sy sary sokitra fibre, sns. Afaka manome vokatra isan-karazany mifototra amin'ny volavolan'ny mpanjifa sy ny fomba tranokalanay izahay.
Ho an'ny karazana sary sokitra dia misy sary sokitra abstrak, sary sokitra biby, sary sokitra, sary sokitra, sary sokitra, sarivongan'i Buddha Andrefana, sary sokitra anatiny, sns, ary manaiky fomba fanao ihany koa.
TSY MISY HITITRERANA NY FIVAROTANAantsika IZANY DIA TOKONY NY FAMPIDORANA ARY ATSORATO.
2.Afaka mahazo fihenam-bidy fanampiny ve aho?
Matetika ho an'ny fandaharana kely dia efa nanome ny teny tsara indrindra nataontsika izahay. Raha be ny haben'ny kaomandy dia mety tsara kokoa ny vidiny. Ary amin'ny fiaraha-miasa voalohany, hanome USD100-300 koa ho fihenam-bidy fanampiny raha lehibe ny baiko. Tongasoa eto hiresaka aminay momba ny fangatahanay.
Previous: Sary sokitra vy misy jiro LED
Manaraka: Sary sokitra ivelany momba ny haingon-trano
Zavakanto-Kolontsain-tsolika metaly lehibe
Mpanakanto sary sokitra Vongana Metal Art mahafatifaty Angel St ...
Sary sokitra vita amin'ny sary sokitra metaly Malaysia ...
Creative Globe Stainless Steel Sculpture Matte ...
Dragon Boat Stainless Steel sary sokitra Shinoa A ...
Haram-boara amin'ny fanatanjahantena Arintany